Taariikh nololeedka Saciid Deni oo dhameystiran. – Xeernews24
Taariikh nololeedka Saciid Deni oo dhameystiran.
8. Januar 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Saciid Cabdullahi Maxamed(Dani) ayaa ku guuleystay madaxtinnimada dowlad goboleedka Puntland, isaga oo goobta lagu dhaariyey si uu Puntland u hoggaamiyo 5-ta sanno ee soo socota.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/01/Siciid-Deni-648x470.jpg 470 648 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-01-08 16:34:132019-01-08 16:34:13Taariikh nololeedka Saciid Deni oo dhameystiran.
Saciid Deni oo loo doortay madaxweynaha Maamulka Puntland. Daawo sidday oromadda iyo dhalinta Soomaaliyeed ugu dagaalamaan magaalooyinka...